Global Voices teny Malagasy » Fanamafisana ny Fiteny Miskitu sy Mayangna ao Nikaragoà Amin’ny Alalan’ny Media Nomerika · Global Voices teny Malagasy » Print
Fanamafisana ny Fiteny Miskitu sy Mayangna ao Nikaragoà Amin'ny Alalan'ny Media Nomerika
Voadika ny 24 Mey 2016 5:09 GMT 1	 · Mpanoratra LaToya Hinton Nandika (en) i Kitty Garden, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Nikaragoa, Mediam-bahoaka
Mpianatra ao amin'ny sekolin'ny fitarihana [leadership] ao amin'ny oniversite URACCAN.
Ity no lahatsoratra voalohany avy amin'ny tetikasa “Miskitus and Mayangnas on the internet” [Miskitus sy Mayangnas ato amin'ny aterineto] anisan'ny nandresy hahazo vatsy tamin'ny antso hanohanana ny fahavitrihana nomerika ho an'ny fiteny vazimba teratany tamin'ny taona 2015. Vao nentina tao Nicaragua ny tetikasa, ary mikendry ny hanamafisana ny fiteny ao an-toerana miaraka amin'ny fandraisana anjara mavitriky ny tanora.
Tamin'ny voalohany ny tetikasa “Miskitus and Mayangnas on the Internet” dia niompana amin'ny andiana atrikasa anankitelo sy fivoriana iraisana anankiroa izay mifantoka amin'ny fananganana sehatra fampitam-baovao ho an'ny tanora. Atrikasa telo mifantoka amin'ny mpianatra avy amin'ny sekolin'ny fitarihana ao amin'ny Oniversite URACCAN , ao amin'ny morondranomasina Atlantikan'i Nicaragua. Misy mpianatra fitarihan'olona 51, manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 18 taona ao. Ny ankamaroan'ny mpianatra fitarihan'olona dia miteny Miskitu na dia mianatra teny Mayangna aza ny sasany, ary misy ny sasany misafidy ny hiteny espaniola sy kiriolona anglisy nikaragoana.
Ny atrikasa orizinaly telo dia ahitana fanitsiana lahatsary, fananganana rakibolana nomerika, ary fampidirana endrika web [web design]. Ny tetikasa rehetra dia tsy maintsy ahitana votoaty teny roa mampiasa ny espaniola amin'ny tenim-bazimba iray (Miskitu na Mayangna). Na izany aza, tamin'ny fihaonana tamin'ny tale vaovaon'ny Sekolin'ny Fitarihan'olona ao amin'ny Oniversiten'i URACCAN, dia nanomboka nazava fa fianarana Media Nomerika no ilain'ny tanora fa tsy atrikasa telo fotsiny ao anatin'ny iray volana. Nanazava ny tale fa maro ny fikambanana sy olon-tsotra avy any ivelan'i Nicaragua no tonga nanome atrikasa amin'ny tanora mpianatry ny fitarihan'olona ary nahatsapa izy ireo fa tsy ahazoana tombony amin'ny fampivoarana ara-akademika an-dry zareo ny fihaonana ifampidihana vonjimaika.
Nanomboka nampivelatra drafitra lesona izahay izay ahitana lahatsary amin'ny fiteny roa anankitelo, rakibolana amin'ny teny roa iray izay ahitana iditra 50, ary tranonkala amin'ny teny roa hanehoana ireo lahatsary sy rakibolan'ny mpianatra tsirairay avy. Nampindrana laboratoara roa fikirakirana solosaina ahafahana miditra aterineto sy rindrambaiko MovieMaker , WeSay  ary Wix.com  ny Oniversiten'i URACCAN ahafahan'ny mpianatra fitarihan'olona mianatra.
Ny andro voalohany amin'ny taranja vaovao “Media Nomerika” dia nampiditra ny tetikasa rehetra sy ny rindrambaiko mety ho ampiasaina mandritra ny fampianarana. Afa-nanazava ny fialamboly mahafinaritra azy indrindra ireo mpianatra fitarihan'olona, toy ny fihainoana hira, filalaovana fanatanjahantena ary ny fandihizana. Ireo no nivadika ho lohahevitra hanaovana ireo lahatsary sasany. Nankafy ireo sakafo maivana nentim-pahazarana antsoina hoe “wabul “, izay vita amin'ny akondro masaka, ihany koa ny mpianatra sasany.
Ny andro faharoan'ny sekoly “Media Nomerika” dia niompana tamin'ny atrikasa nahafahan'ny mpianatra nandeha teny an'arabe haka ny sarin'izy ireo tsirairay na niaraka tamin'ny vondrona isan-tarika. Nampiasa finday, finday raitra ary tabilety avokoa ny mpianatra rehetra amin'ny fakana sary mitsangana na mitsilany.
Taorian'ny fakasa sary dia nisy ny fanaovana fampisehoana amin'ny fomba fampidirana ny sary ao amin'ny solosaina. Ny andro fahatelon'ny kilasy “Media Nomerika” dia nanomboka teo ivelan'ny trano fatorian'ny mpianatra fitarihan'olona, izay nahitana tabilao fotsy ihany koa. Ny lesona dia nifantoka tamin'ny fomba handaharana tantara (script) amin'ny fampiasana ny sary noraisin'ny tsirairay nandritra ny andro fianarana teo aloha. Nianatra ny fomba fampidirana lohateny, andian-tsehatra miaraka amin'ny dikandahatsoratra amin'ny teny Miskito na Mayangna ny mpianatra, ary ny tompon'ny sary na tantara.
Nankafy tamin'ny fihinanana sakafo maivana antsoina hoe “Pati ” tao amin'ny vondrom-piarahamonina kiriolona ao Nicaragua ny mpianatra, sy fisotro kely mialoha ny nidirana voalohany indrindra tao amin'ny laboratoaran'ny fikirakirana solosaina. Ny andro fahaefatry ny kilasy “Media Nomerika” dia nitranga tao anatin'ny laboratoaran'ny fikirakirana solosaina antsoina hoe “Lakia Tara” na “Kintana Lehibe” amin'ny teny Miskitu.
Niasa isam-bondrona ny mpianatra fitarihan'olona tamin'ny fampidirana ny sarin-dry zareo avy amin'ny finday, finday raitra ary tabilety. Mary tamin'ny mpianatra no nahavita lahatsary tamin'ny fampiasana fisesisesin-tsary, dikandahatsoratra ary hira milaza ny tantaran'izy ireo sy ny fianakaviany. Tao amin'ny lakilasy ivelan'ny trano fatoriana indray no nanatanterahana ny andro fahaefatra, ary tafiditra amin'izany ny fanolorana ny mety hahavitana fandravahana hananganana tantara ambava nomerika. Nahita ohatra amin'ny tantara nomerika iray tao amin'ny YouTube ny mpianatra fitarihan'olona. Avy eo ry zareo nanomboka nampivelatra ny tantara voaravaka an'izy ireo manokana, ny sasany nifototra tamin'ny sarimiaina, ny sasany nifototra tamin'ny Kisi nani  (tantara tantaraina am-bava amin'ny teny Miskito) na tamin'ny tantara malaza amin'ny lahatsoratra fiteny roa misy amin'ny fiteny Mayangna.
Tamin'izay fotoana izay ny mpianatra fitarihan'olona no faly hiverina indray ho ao amin'ny Lakia Tara hamoaka ny fandravahana ho amin'ny tetikasan-dry zareo sy namita ny tetikasan-dahatsary voalohany izay nataon-dry zareo ho an-dry zareo, ho an'ny mpiara-mianatra amin-dry zareo ary ho an'ny fianakavian-dry zareo.
Mpianatra eo am-piasana tao amin'ny sekolin'ny fitarihan'olona ao amin'ny Oniversite URACCAN.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/05/24/83041/
 Kisi nani: https://www.worldcat.org/title/miskitu-kisi-nani-cuentos-miskitos/oclc/15344325/editions?referer=di&editionsView=true